Madaxweynaha Jubbaland oo Amaro kasoo saaray Barnaamis is qab qabsigiisa Batay? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Madaxweynaha Jubbaland oo Amaro kasoo saaray Barnaamis is qab qabsigiisa Batay?
Madaxweynaha Jubbaland oo Amaro kasoo saaray Barnaamis is qab qabsigiisa Batay?
Is qab-qabsi la xiriira dhulalka Danda guud ayaa kusoo kordhaye Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubada Hoose, waxaana marar badan Magaaladaas ka dhacay isku dhacyada ay ka qeyb Qaataan Ciidamada.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa sheegay in maanta wixii ka dambeeyo uu maamulka Jubbaland la wareegayo Dhulalka Danda guud ah ee ay Dadka isku dagaalaan.
Axmed Madoobe ayaa digniin u diray Ciidamada Maamulka ee ka qeyb galay Dagaaladaas, waxa uuna sheegay in tallaabo laga qaadi doono askarigii ka qeyb galay isku dhacyada dhulalka la isku heysto la xiriira.
Waxa uu sheegay in Maalmihii lasoo dhaafay uu la kulmaye qeybaha kala duwan ee bulshada, waxa uuna sheegay in Cabashadooda ugu badan ay la xiriirta is qab-qabsiga dhulka la xiriira.
Is qab-qabsigaas ayuu tibaaxay in ay qeyb yihiin Maamulka, waxa uuna digniin u diray dad uu sheegay in Magaalada iyo Duleedkeedaba Oodanaya ama Xir-xiranaya. waxa uuna tilmaamay in dhulkaas uu Maamulka la wareegayo.
Qeybsiga Dhulka ayuu ku sheegay in Qoys waliba la siinayo in uu degi karo, wixii ka badane Maamulka uu la wareegayo, Xubnaha Maamulka katirsan ee ka qeybta ah is qab-qabsiga dhulka, Ciidamada iyo Dad uu sheegay in ay Dhulalka Dadka ku dila ama ay Sii Iibiya ayuu sheegay in aanaan maamulka ugu daba hari doonin.